"Waxa Uu Ka Fiican Yahay Zidane!!" - Jamaahiirta Man United Oo Xiddig Kooxdooda Ah Amaan Ku Dhaafiyay Heerkii Ciyaartoynimo Ee Tababare Zidane. - Gool24.Net
“Waxa Uu Ka Fiican Yahay Zidane!!” – Jamaahiirta Man United Oo Xiddig Kooxdooda Ah Amaan Ku Dhaafiyay Heerkii Ciyaartoynimo Ee Tababare Zidane.
Manchester United ayaa kulan saaxiibtinimo kaga hor tagtay kooxda magaalada tababaraha kooxdeeda ee Ole Gunnar Solskjaer uu kasoo jeedo ee lagu magacaabo Kristiansund iyaga oo guul 1-0 ah ka gaadhay.
Kulankaas ayaa ahaa mid Kristiansund ay soo bandhigtay qaab ciyaareed daafacasho oo aad u adag balse waxa ugu dambayn kulanka go’aamiyay rigoore lagu galay Juan Mata oo uu isla Mata gool u bedelay.
Kulankaas ayaa ahaa mid uu indhaha jamaahiirta Red Devils si gaar ah usoo jiitay khadka dhexe ee kooxdaas ee Scott McTominay kaas oo ay jamaahiirtu si baahsan u amaaneen.
McTominay ayaa kulankaas khadka dhexe kula soo bilawday Nemanja Matic iyadoo keydka uu ku jiray Paul Pogba waxaana haatanba la odhan karaa waxa uu markale soo sameeyay bandhig wacan sidii uu samaynayay dhammaan kulamadii saaxiibtinimo.
Da’yarkan ree Scotland oo kulankaas 60 daqiiqo kasoo ciyaaray ayaa soo sameeyay bandhig guud ahaaneed oo wanaagsan isagoo fursad aad ugu dhawaatay goolka ku garaacay laag xoogan birta.
Si kastaba, Jamaahiirta Red Devils ayaa xiddigan amaan ugu qubeeyay, Mid kamida jamaahiirtaas ayaa si fudud ku dhaafiyay heerkii ciyaartoynimo ee Zinadine Zidane halka qaarkood ay dalbadeen in laga dhigo bedelka Nemanja Matic.
Taageeraha koowaad ee dareenkiisa cabbiray ayaa yidhi “McTominay ayaa maamulaya”
Taageeraha labaad ayaa raacdsaday “McTominay dhawaanahan in badan ayuu horumaray halkii uu ka ahaa kaliya mid kubadda kusoo guuleysa oo bixiya, Waa inuu noqdo midka bedela Matic halkii uu ka garab ciyaari lahaa”
“McTominay waxa uu ka wanaagsan yahay Zidane” Ayuu yidhi taageeraha saddexaad oo xiddigan amaantiisa heer kale ku gaadhsiiyay.
“Ciyaartoyga ugu fiican ee garoonka ku jira” Ayuu yidhi taageeraha afraad.
“McTominay wuu korayaa ka ciyaartoy ahaan, Been ma sheegi karo ee shakiyo ayaan ka qabay markii hore” Ayuu yidhi taageere kale.